Ny poketran’ny lehilahy mpanendaka izay azon’ilay lasibatra no nahitana io kara-panondrony io ka nentina teny amin’ny polisy niaraka tamin’ny fitarainana. Tamin’ny alalan’izay kara-pamantarana manokana amin’ny maha olom-pirenena izay no niainga ny fikarohana notanterahin’ny mpitandro filaminana. Lehilahy roa no voasambotry ny polisin’ny kaomisarian’Antaninandro ny alarobia teo, teny Andraisoro. Raha iverenana ny tranga, tamin’ny alin’ny 8 aogositra teo no voaendaka teny Andraisoro ny vehivavy iray. Lasan’ny olon-dratsy ny fananany.
Tsy nanaiky lembenana anefa io renim-pianakaviana io ka raha variana nifantoka tamin’ny halatra ny entany ny mpanao ratsy dia voajokony kosa ny kitapo kelin’ity farany izay teny am-babeny. Ny zoma 9 aogositra no nametraka fitarainana ilay lasibatra sy nanatitra ilay kitapo. Rehefa nosavaina io dia nahitana ilay kara-panondro. Lehilahy iray hafa ihany koa no niara-voasambotra taminy. Efa nisy raharaha hafa koa mahakasika fanendahana ihany nikarohana ity mpanao sinto-mahery ity. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, tsy mbola voaverina tamin’ny tompony ny zavatra very.